Uyithola Kanjani Imali Ekhaya: Izindlela Ezi-5 Ezifakazelwe | Iforamu yeselula
Indlela yokwenza imali ekhaya: Izindlela ezi-5 ezifakazelwe
UDaniel Terrasa | 15/06/2022 22:00 | Kubuyekezwe ngomhla ka- 15/06/2022 23:06 | Internet
Lona umbuzo abantu abaningi abawubuzayo: Indlela yokuthola imali ekhaya? Izizathu zisobala: umnotho wasekhaya uya ngokuba mubi kakhulu, njengoba amanani ayo yonke imikhiqizo ekhuphuka futhi impilo ibe nzima kakhulu. Ngenhlanhla, sonke siyakwazi ukufinyelela ku-inthanethi, okuyinkundla engapheli yamathuba okuthola imali ngaphandle kokuthi sisuke emakhaya ethu.
Kodwa, njengoba besho, konke okucwebezelayo akulona igolide. Ku Internet konke kukhona, okuhle nokubi. Akuyona yonke into ebonakala futhi ngokuvamile sizohlangana ukukhwabanisa nokukhohlisa zonke izinhlobo. Ngokuvamile, kufanele siqaphele amasayithi nemibono esinikeza imali esheshayo nelula.
Lapha ngeke sidalule amafomula ayimfihlo ukuze ube usozigidi, nakuba amanye izindlela ezifakazelwe ezisebenzayo kulabo abacabanga ukuqala iphrojekthi entsha ye-inthanethi noma labo abafuna ukuthola imali eyengeziwe:
1 Dala isitolo esiku-inthanethi
2 Thengisa ukukhangisa kuwebhusayithi yakho
3 Yiba nesiteshi se-YouTube
4 Phendula izinhlolovo futhi ubuke izikhangiso ku-inthanethi
5 Faka imali kuma-cryptocurrencies
Dala isitolo esiku-inthanethi
Uyenza kanjani imali ekhaya: dala isitolo se-inthanethi
Eminyakeni yamuva, ukuthuthukiswa amapulatifomu e-e-commerce ikwenze kwaba lula kunangaphambili ukuqala ibhizinisi eliku-inthanethi. Noma ubani onombono omuhle futhi ozimisele ukutshala isikhathi nomzamo kuwo angakha isitolo sakhe se-inthanethi futhi aqale ukwenza imali.
Ngenxa yalolu hlobo lwamathuluzi (njenge Thenga, PrestaShop nabanye), kungenzeka dala isitolo se-inthanethi esiqondene nawe ngemizuzu futhi qala ukuthengisa imikhiqizo noma amasevisi akho. Izinyathelo zilula:
Okokuqala, kufanele ubhalise endaweni yesikhulumi.
Bese sikhetha umklamo owufanela kangcono umbono wethu noma umkhiqizo.
Sibe sesilayisha imikhiqizo yethu endaweni yesikhulumi.
Ekugcineni, silungisa izindlela zokukhokha bese sikhetha izindlela zokuthumela.
Ingxenye "yemishini" yokwakha isitolo se-inthanethi ayinzima, iqiniso liwukuthi ifinyeleleka kuwo wonke umuntu. Into enzima ngempela thola imakethe ye-niche edingeka kakhulu. Kuhle ukutshala iningi lemizamo yethu kulokhu: chitha isikhathi sihlaziya futhi sibone ukuthi amathuba akuphi. Abantu abaningi bakwenzile futhi bakwazile ukwakha ibhizinisi elincane abangazuza ngalo izinzuzo ezengeziwe futhi baze baziphilise kahle kakhulu.
Thengisa ukukhangisa kuwebhusayithi yakho
Uyenza kanjani imali ekhaya: Thengisa ukukhangisa kuwebhusayithi yakho
Uma unebhulogi noma iwebhusayithi, lena indlela enhle yokwenza yenza imali ngokuqukethwe kwakho. Ngaphambi kokuthi sikhethe lezi zindlela zokuthola imali ekhaya, sizodinga ukuthi sibe nesibalo esincane se-traffic kusayithi lethu, ukuze abakhangisi basiqaphele.
Ukukhangisa kungathatha izinhlobo eziningi ezihlukene, ngezibhengezo nezixhumanisi phansi kwekhasi, izibhengezo eziseceleni, amawindi azivelelayo... Ungakwazi futhi ukuthola imali ngokuthunyelwe okuxhasiwe, ukubuyekezwa kwemikhiqizo, njll. Konke okushiwo kusemthethweni futhi akhawunti ye Twitter, Instagram namanye amanethiwekhi omphakathi. Uma sikwazi ukuba nabalandeli abaningi nokuqukethwe okuhle, imali izogcina isingqongqoza emnyango wethu.
Yiba nesiteshi se-YouTube
Uyenza kanjani imali ekhaya: Yiba nesiteshi se-YouTube
Sonke siyabazi labo abadumile youtubers abenze igolide ngamashaneli abo namavidiyo abo. Ithini imfihlo yakho? Iqiniso liwukuthi ngaphandle kokufinyelela kulawo mazinga, wonke umuntu unethuba lokuzuza imali ngokuvula esakhe isiteshi se-YouTube. Kudingeka ikhono elithile, inhlanhla encane nokubekezela okukhulu.
Ngokuphambene nalokho abantu abaningi abakucabangayo, i-YouTube ayilikhokheli inani labavakashelwe noma ababhalisile. Ekwenzayo ukunikeza ikhomishini yezinye izenzo ezihambisanayo (ukukhangisa, i-superchat, ubulungu, njll.). Ngokunengqondo, uma uvakashelwa kakhulu, uba mkhulu umvuzo wezezimalia, nakuba inani eliqondile linzima ukubala.
Indlela engcono kakhulu yokuthola imali engenayo evamile ku-YouTube iwukuba udale okuqukethwe okuyikhwalithi ngokungaguquki. Ayikho imfihlo edlula leyo.
I-Ver también: Izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zabasebenzisi be-YouTube ozophumelela ngazo
Phendula izinhlolovo futhi ubuke izikhangiso ku-inthanethi
Uyithola kanjani imali ekhaya: Thatha izinhlolovo futhi ubuke izikhangiso ku-inthanethi
Nakuba kungase kubonakale kungakholeki, kukhona amakhasi akhokhayo buka izikhangiso eziku-inthanethi noma amavidiyo axhasiwe. Enye yezinto ezaziwa kakhulu yi- I-Beruby, lapho kunezigaba ezi-4 zamavidiyo: ezemidlalo, izindaba, ukuvakasha kanye nemidlalo yevidiyo. Kwezinye, njengeholo likhokhwa ngu gcwalisa izinhlolovo. Kwesinye isikhathi inkokhelo ingeyohlobo oluthile, ngamakhadi esipho angasetshenziswa e-Amazon, Carrefour, El Corte Inglés, Fnac noma kumasayithi afanayo. nabanye abafana Uhlelo lokusebenza lwemali bakhokhela kokubili: ukugcwalisa izinhlolovo nokubuka amavidiyo.
Umbuzo okungenzeka uzibuze wona uma ufunda lokhu uthi: Kodwa ingabe lawa mawebhusayithi akhokha ngempela? Impendulo ithi yebo. Isisekelo saleli bhizinisi siku ukukhangisa Abakhangisi bathola ukubuka okuningi okwengeziwe ngabo, ngakho-ke, nokufinyelela okukhulu.
Nokho, kufanele kuvunywe ukuthi imali abayikhokhayo incane kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kufanele uqongelele inani elincane ukuze ucele inkokhelo. Naphezu kwalokhu, uma ungomunye walabo abachitha isikhathi esiningi ku-inthanethi ngeselula yakho ebuka amavidiyo, kungani ungaziniki ithuba lokuzuza imali eyengeziwe?
I-Ver también: Izinhlelo zokusebenza zokuthola imali ngokubuka amavidiyo
Faka imali kuma-cryptocurrencies
Uyenza kanjani imali ekhaya: tshala imali kuma-Cryptocurrencies
Nakuba ezikhathini zamuva umhlaba we cryptocurrencies isesimweni esibi, kunabantu abaningi emhlabeni wonke abazuze izindodla zemali ngalolu hlobo lokutshalwa kwezimali. Impumelelo ye Bitcoin kubangele i-crypto fever yangempela. Abanye baye bazinikela ekutadisheni lesi sifundo futhi bathola izinzuzo ezinkulu. Abanye bamane babhejela ihhashi eliwinayo ngesikhathi esifanele, indaba emsulwa yenhlanhla.
Kulabo abafuna ukukuzama, kukhona ukuhwebelana okuthembekile okuthandwa kakhulu njengo Binance, Coinbase o Kraken, ukusho ezinye ezisetshenziswa kakhulu.
Ukuze uqalise kuleli zwe, kungcono kakhulu ukufunda isihloko ngokujulile, ukwaziswa kahle (qaphela i-Internet gurus yamanga), zama ukufunda, ukuhlakanipha futhi ungathathwa izingoma ze-siren. Futhi kungukuthi ukutshalwa kwezimali kuma-cryptocurrencies kuhlanganisa izingozi eziningi. Ukuguquguquka kuphezulu futhi akekho owazi ngokuqinisekile ukuthi lokhu kuzoba yimali yesikhathi esizayo noma imfashini.
I-Ver también: Iyini imayini ye-cryptocurrency futhi ihlanganisani?
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Internet » Indlela yokwenza imali ekhaya: Izindlela ezi-5 ezifakazelwe
Chofoza imibono. Ingabe kuphephile ukuthenga imoto?